पूर्वएमाले सांसद इच्छाराज तामाङको सिभिल होम्सको घर किन्दा डुबे घरधनी, सम्झौताअनुसार भएन काम - Sagarmatha TV Sagarmatha TV
२५ श्रावण २०७५, शुक्रबार ०८:३४
काठमाडौं । पूर्वएमाले सांसद इच्छाराज तामाङ अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्स प्रा.ली । जसले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा हाउजिङ र घरहरु विक्रीगर्दा खरिदकर्तासँग भएको सम्झौता विपरित काम गरिहेको खुलासा भएको छ ।
सर्वसुविधा सम्पन्न भन्दै मोटो रकम असुलेर बेचिएका घरहरुमा सम्झौता अनुरुप काम नभएपछि खरिदकर्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । समस्या पनि यति छ की, सिभिल होम्स् सामान्य बाटो समेत कालोपत्रे गरेको छैन । अर्कातिर भूकम्प प्रतिरोधी भनिपनि बनेको केही बर्षमै घरहरु आफैं चर्कन थालेका छन् ।
यतिमात्र होइन १ सय ९६ घरको लागि भनेर बनाईएको चिल्ड्रेन पार्कमा एकैपटक १० जना बालबालीका पनि खेल्न सक्दैनन् । अर्कातिर स्थानियका अनुसार, पार्कमा उचित सुरक्षाको उपाय समेत अपनाइएको छैन । पार्कमात्र होइन, सिभिल होम्स भित्रको स्विमिङ्ग पुलको हालत पनि उस्तै छ । प्रयोगमा आएको केही बर्ष बित्न नपाउँदै स्विमिङ्ग पुल भत्कन थालेको छ ।
हुनपनि सिभिलले उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा फेज १ देखि फेज ९ सम्म निर्माण गरिएका र गर्दै गरेका आवासीय भवनमा सरकारी निकायबाट लिएका प्लानिङ पर्मिट अनुसारको काम भएको छैन । अर्को समस्या के छ भने सिभिल होम्समा घर खरिद गरेर बसेका ९० प्रतिशत घरधनीले अहिले सम्म निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन समेत पाएका छैनन् । खरिदकर्ता रोहणी जोशी भन्छीन् निर्माण सम्पन्न प्रतिवेदन त पराईजावस् स्वच्छ खानेपानी समेत सिभिल होम्सले दिन सकेको छैन ।
अर्का खरिदकर्ता रत्नमेहर बज्रचार्यको गुनासो पनि उस्तै छ । उनि भन्छन् – निर्माण सम्पन्न भएपछि प्रयोग योग्य बनेको घर मात्र ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा सिभिल होम्सले त्यसको प्रमाणपत्र बापत भन्दै अतिरीक्त शुल्क समेत नगरपालिकालाई तिराउन बाध्य बनाएको छ । सिमिल होम्सले ग्राहकलाई गरेको अन्याय यतिमा मात्र सिमित छैन, हस्तान्तरण भईसकेका बस्ती भित्रका अन्य संरचना सरकारीकरण गरिनुपर्ने नियम भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन ।
खरिदकर्ता जेशनदेव बैद्य भन्छन् – सर्बोच्च अदालतले समेत हस्तान्तरण गरिसकेको कोलोनी भित्रका संरचनामा कोलोनिबासीकै अधिकार हुने फैसला गरेपनि सिभिल होम्सले भने त्यो फैसला मानेको छैन । सडक, पार्किङ, स्वमिङपुल, पार्कलगायत खुला ठाउँको लालपुर्जा अहिले पनि सिभिल ग्रुप सँगै छ । अर्कातिर सिभिल होम्स भित्रका घरमा आगलागी भएमा नियन्त्रणका लागि आउने दमकल समेत दोहोर आवतजावत गर्न नसक्ने बाटो छ ।
यति मात्र होइन, सिभिल होम्सले संयुक्त आवास अर्थात हाउजिङ निर्माण गर्दा एउटा हरित क्षेत्र निर्माण गर्ने र हरेक घरमा २ वटा रुख रोप्ने प्रतिवद्धता उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । तर सो प्रतिवद्धताअनुरुप कुनै पनि हाउजिङमा हरित क्षेत्र निर्माण, वृक्षारोपण, र मठ मन्दिर निर्माण क्षेत्र समेत छुट्याईएको छैन ।
किन ग्राहक लुट्दै छ सिभिल होम्स ?
बास्तविकता बुझ्न हामीले सिभिल ग्रुपका सञ्चालक इच्छाराज तामाङसँग सम्पर्क गर्‍यौं । तर, उनि आफू यो विषयमा बोल्न मानेनन् र सूचना अधिकारी भीम खरेल सँग सम्पर्क गर्नु भन्दै पन्छिए । भीम खरेल भने आफूहरुले नियमविपरित काम नगरेको दाबी गर्छन् । उनि भन्छन्–साना तिना बाहेक ग्राहकसँग गरेको सम्झौतामा कतैपनि तलमाथी भएको छैन । यता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी अनुगमनमा मापदण्ड विपरित भेटिए सिभिल होम्सलाई कारावही गर्ने बताउँछन् ।